Izingane zase-Ubongo, ikhathuni laseTanzania lapho lifuna i-Afrika - Afrikhepri Fondation
NgoLwesithathu, Septhemba 22, 2021
Ukuzwakala izwi likapholi elihoshozayo emahhovisi e-Ubungo Media. Esitudiyo sokuqopha esincane esingavikelekile ngemuva kwe-indawo evulekile, UCleng'a Ng'atigwa, ongomunye wabasunguli abahlanu balesi siqalo saseTanzania esisebenza ngokukhethekile ekukhiqizeni opopayi, uqopha imigqa yokugcina kaMama Ndege, inyoni enezimpaphe eziluhlaza nomoya ohlekisayo, kuyilapho ama-animator amathathu Abantu be-3D bamatasa ngemuva kwama-computer abo. Ezinsukwini ezimbili, isiqephu esisha se-Ubongo Kids izosakazwa ku-TBC1, isiteshi sesithelevishini somphakathi saseTanzania.
Kukhishwe okokuqala ngoJanuwari 2014, Ubongo Kids yilolu chungechunge lokuqala lwe-animated "Idalwe kusuka ekuqaleni eTanzania ngabenzi bama-animators baseTanzania". Okuqukethwe kwayo kwezemfundo, okugxile emathematika nesayensi, kubonisa ukuthi kunezintathu ezinganeni ezintathu ezweni elicabangela lapho izilwane zikhuluma khona.
Ngenxa yesikhulumi se-SMS esisebenzisanayo esifinyeleleka ngentengo yamasenti ama-2 euros ngamahora angama-24, izingane zingabamba iqhaza emibuzweni okuxoxwa ngayo ngezindikimba zayo phakathi nohlelo.
“Abantu abayizigidi eziyi-9 bane-TV nezinsimbi zokungena ezilinganiselwa ku-65%. Senze uhlelo olujwayela ubuchwepheshe obukhona eTanzania ukufinyelela izingane eziningi ngangokunokwenzeka ”, Kuchaza uCleng'a Ng'atigwa.
Iqhutshwe ezinyangeni ezimbalwa iye ezingeni lohlelo olubukwa kakhulu ezweni elinababukeli abangaphezu kwesigidi njalo ngesonto, Ubongo Kids isakazwa nangesiNgisi kulo lonke elaseMpumalanga Afrika ngesiteshi sesethelayithi saseChina i-Star Swahili, kuchaza uNisha Ligon, ongumsunguli kanye nomqondisi omkhulu we-Ubongo Media.
Ngemuva kokuchitha unyaka eDar-es-Salaam njengengxenye yokushintshana eyunivesithi futhi ngiphothule iziqu ze-master eLondon ezigxile ekufundiseni isayensi ngobuchwepheshe obusha, lo waseMelika oneminyaka engamashumi amathathu anezinwele ezisontekile futhi ngobuso obunobuntwana, unquma ngo-2013 ukuhlala unomphela eTanzania.
“Bengifuna ukusebenzisa ulwazi lwami futhi ngenze izinhlelo zezemfundo ezweni lapho bekungekho lutho olunje. Ngonyaka wami wokufunda eDar-es-Salaam, ngahlatshwa umxhwele ukungabi bikho kokuzijabulisa kwezingane nokwehluleka kohlelo lwemfundo yaseTanzania ”, uthi.
Ngenkathi inkampani manje iqashe abantu abasebenza ngokugcwele abayishumi nanhlanu futhi ilungiselela ukuthuthela endaweni entsha, enkudlwana enesitudiyo sopopayi, uNisha Ligon ukhumbula isikhathi lapho abasunguli abahlanu abahlangana khona wakhe ukusebenza. “Sonke besinomsebenzi eceleni. Senze iziqephu zokuqala eziyisithupha ngaphandle kwesakhiwo nangendlela yethu ”, ukhumbula umkhiqizi.
Ixhaswe ikakhulukazi ngabatshalizimali abazimele kanye nemikhankaso yokubuyiselwa kwemali yabantu abaningi (imodi yokuthola imali ngobuningi ngeWebhu), i-Ubongo Media ikwazile ukuthuthuka ngokwengxenye ngenxa yokuxhaswa yibhange laseTanzania iCRDB kanye nemali engenayo eyenziwe ukusakazwa kohlelo kusathelayithi i-Star Swahili isiteshi.
“Siqoqe ama-euro angama-50 000 sibonga umkhankaso wokuxhaswa kwabantu abaningi kanti iCRDB isabele isabelomali samashumi ambalwa ezinkulungwane zama-euro. Kepha iningi lemali yethu engenayo likhokha umsakazi wethu omkhulu. Amaketanga aseTanzania awanamali. Umthetho ukhokhela ukusakazwa ”, uchaza lo wesifazane osemusha.
Isiqalo sifuna imali yesizini yesibili kaUbongo Kids. Ukuze wandise eNingizimu Afrika ekhuluma eNtshonalanga Afrika, i-Ubongo Media okwamanje ihumusha iziqephu zibe isiFulentshi. Le nhlangano ilungiselela ukwethula ikhathuni entsha yezemfundo ezofundisa isiNgisi ezinganeni ezineminyaka emithathu kuya kwengu-3.
Funda kabanzi mayelana ne http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/05/02/ubongo-kids-un-dessin-anime-tanzanien-a-la-conquete-de-l-afrique_4626343_3212.html#GELvGfp27dHQzt7w.99
Ungayithenga kuphi amadonsa omnyama kubantwana bakho
Indoda elungisa abesifazane, i-documentary elandela indlela kaDkt. Mukwege
U-André Pinto Rebouças, umsunguli wethoshi
Lukeni, i-smartphone yokuqala ngezilimi nemibhalo yase-Afrika
Umlando Jikelele wase-Afrika - Vol 6 (PDF)